Ukuphikisana kwamaTemarios uCorreos 2022 ▷ ukubuyekeze LAPHA! | Ukwakheka nezifundo
Thumela i-ajenda yokuphikisa
Ngemuva kokushicilelwa kwe- isimemezelo sokuphikisana kukaCorreos, yisikhathi sokufaka izicelo. Unyaka nonyaka, iCorreos ikhipha izingcingo ezintsha zezivivinyo zokuncintisana ukwehlisa isilinganiso seminyaka yabasebenzi, ngakho-ke kuhlale kuyisikhathi esihle sokuqala ukutadisha i-Opposition to Correos. Uma ufuna ukufunda kabanzi, lapha sikutshela konke.
Ama-ajenda abuyekeziwe wokuphikisana kweCorreos
Ngezansi uzothola wonke amaphakethe esinawo ngama-ajenda eposi avuselelwe ukuze ukwazi ukwamukela kalula ngentengo engcono kakhulu yezimakethe. Kudlula ngaphezu kwama-95% Ekuphikisweni kweCorreos uyasisekela!
Kuyindlela eshibhile futhi ephelele kunazo zonke ngoba ngaphezu kokuthola amavolumu amabili ane-ajenda ebuyekeziwe evela eCorreos, uzothola:
Bhuka ukulungiselela izivivinyo ze-psychotechnical
Ukuhlekisa izivivinyo ukuzijayeza
Ukuhlolwa ukulungiselela ukuhlolwa
Ukufinyelela kuwebhusayithi eku-inthanethi ngezinsizakusebenza ezizokusiza ukuthi uthuthukise ukulungiselela kwakho ucingo.
Iphakethe le-premium elalabo abafuna ukulungiselela kahle ngangokunokwenzeka isivivinyo ngoba, ngaphezu kwalokhu okufakwe kupakethe lokonga, uzophinde uthole uchungechunge lwezinto ezengeziwe ezithokozisayo:
Amaglosari nezinkomba zomthetho ngesihloko
Ama-Schematics nemidwebo yokwenza lula ukufunda
Ukufingqwa kwesihloko ngasinye kanye nemihlahlandlela yokufunda
Ukuhlekisa izivivinyo ngezici zangempela
Izifundo ezinamasu okufunda okulungiselela ukuhlolwa
Amaphilisi okuchaza ngezihloko ezibalulekile
Kuhlolwe izivivinyo zezingcingo zangaphambilini
Uzokwazi nokufinyelela kulesi sikole izinyanga ezintathu noma izinyanga eziyi-3, kuya ngesikhathi okufanele ufunde ngaso.
I-Premium Pack enezinyanga ezintathu zesikole
Uma kungenzeka ukuthi awunantshisekelo kula mapakeji, futhi unethuba lokuthenga imikhiqizo oyidingayo ngawodwana. Lezi izinketho ezitholakalayo:
Ama-ajenda kuphela: lena yi-ajenda yonke yasePosini ebuyekezelwe ocingweni lokugcina.
Ukuhlekisa izivivinyo: zijwayeza ukuhlolwa ngendlela elula nephumelela kunazo zonke.
Izincwadi zokudlulisa ama-psychotechnics: iqhinga lokuthola amamaki amahle ukwenza konke ukuhlolwa okungenzeka. Ulindeni?
Ukulungiselela izivivinyo eziningi zokukhetha: ngemibuzo eminingi ukuze ujwayelane nalolu hlobo lokuhlola.
2020 ikholi yokuphikisana kwangemva kwe-op
ICorreos ibize izindawo ezingama-3.421 zokubiza unyaka ka-2020. Kumele kuthiwe zonke lezi zindawo zengeza ububanzi bezwe. Ngemuva kwalokho, kuzofanele uye kufayela le- isimemezelo sokuphikisana kukaCorreos bese uthola izikhundla zesifundazwe ngasinye.
Lapho ucingo seluvulekile, kufanelekile ukuthi ubuyekeze ukuhlolwa okulindele thina. Imayelana ne- isivivinyo esisodwa esivamile nezimbili eziqondile, kokubili ukusatshalaliswa nokuhlukaniswa kanye nokwenziwa kwamakhasimende. Isivivinyo sokuqala, esivamile, sisekelwe ekuhlolweni kokukhetha okuningi kwemibuzo engama-60. Zingu-10 kuphela zazo ezizoba yi-psychotechnical. Ukwenza lokhu, umphikisi ngamunye uzoba nemizuzu engama-55. Izivivinyo ezikhethekile nazo zinokukhetha okuningi. Kepha kulokhu, kuzoba nemibuzo engaba ngu-40 futhi isikhathi esiphezulu esitholakalayo kubaphikisi imizuzu engama-35.
Uma udlulise i- isigaba sokuhlola nokuqeda, lapho-ke isigaba sokuhlola sokufaneleka kwakho sizofika. Okunye kokuthola amaphuzu okulandelayo:
Ukuba mdala ePosini. Ngaphandle kwesikhundla esizobanjwa, phakathi neminyaka engu-7 edlule.
Benze imisebenzi esifundazweni eceliwe.
KungokwamaBhodi Emisebenzi womabili isikhundla esithile kanye nesifundazwe.
Iziqu zaseyunivesithi noma iziqu eziphakeme zokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe kwezokuphatha, ezokuphatha, ezentengiso, ezokumaketha kanye ne-IT.
Izifundo ezihlobene nezikhundla ezifakiwe.
Imvume A noma A1, 3 amaphuzu. Ilayisense yokushayela, iphuzu elilodwa nje.
Thumela izidingo zokuphikisa
Yiba okungenani iminyaka engu-18 futhi engakafiki eminyakeni engama-65 yobudala.
Isitifiketi Semfundo Esiphoqelekile, noma iSikole Esithweswe Iziqu kanye Nanoma yisiphi esinye isiqu esisemthethweni esingangena esikhundleni seziqu zokuqala.
Ukungabi nanoma yiluphi uhlobo lomsebenzi olulungiswe nePosi.
Ukungaxoshwa noma ukuhlukaniswa nensizakalo.
Yiba namandla adingekayo ukwenza imisebenzi edingekayo.
Yiba nobuzwe baseSpain, noma okungenani ube yisakhamuzi se-European Union. Yiba namaphepha okusebenza ahlelekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza umsebenzi.
Ukuze ube ngumuntu odiliva iposi, udinga ikhadi le-A, A1 noma le-B.
Ungabhalisela kanjani ukuphikisana neCorreos
Okuqoshwe kokuphikisana kukaCorreos kuzokwenziwa ngekhasi layo elisemthethweni. Lapho isikhathi sokufaka isicelo sesiphelile, singabhalisa online. Ukuze ubhalise, kufanele ulandele izinyathelo eziningana:
Uzofaka ikhasi leCorreo.es, lapho-ke uzoya 'kulwazi lwenkampani', 'Ezabasebenzi', 'Ukuqashwa' futhi ekugcineni 'imali engenayo yomuntu siqu evela emsebenzini'.
Isinyathelo esilandelayo 'ukubhaliswa kohlelo lokusebenza'. Kulesi sigaba, kuzofanele ubeke i-ID yakho kanye nephasiwedi, ulandele izinyathelo i-web ekunikeza zona.
Isinyathelo sesithathu yilezi vala imininingwane yakho. Njalo hlola ukuthi ngabe zonke zilungile yini futhi ungakhohlwa ukufunda inqubomgomo yobumfihlo.
Manje kuzofanele ukhethe isifundazwe lapho ufuna ukusebenza khona, kanye nomsebenzi ofisa ukuwenza.
para qeda ukubhalisa, kufanele ukhokhe amanani angama-euro ayi-13. Yebo, ngaphambi kokuthi kube yi-10 euro kepha bakhuphukile. Indlela yokukhokha yikhadi. Lapho inkokhelo isiqinisekisiwe, uzothola isihlonzi sesicelo nobufakazi bokukhokha.
Ezinye izinhlobo zemibhalo kanye nezihloko onazo, ngeke kudingeke okwamanje, kodwa kuzodingeka ngezigaba ezizayo. Vele, ukuze wenze noma yiziphi izinguquko, kuzofanele ukhansele isicelo esedlule bese ugcwalisa esisha futhi.
Imiholo yabasebenzi beposi
Iqiniso ukuthi indaba yamaholo ihlale ingenye yemibuzo ebuzwa njalo. Kumele kuthiwe isibalo sokugcina singahluka njalo. Njengoba kuzoncika ekukhokhelweni okwengeziwe, isikhundla, isikhundla nezinye izinto okufanele uzicabangele. Kepha, nokho, sinamanani alinganiselwe ukukunika umbono:
Abasebenzi abaphezulu: Ngaphakathi kwalolu hlobo lwabasebenzi sizothola umsebenzi we-manipulator, umhumushi, izinsizakalo zeselula, i-opharetha, njll. Zonke zinomholo osukela ku-1300 kuye ku-1500 euros.
Abasebenzi base-Base: Okuphansi kancane umholo walesi sisebenzi. Kepha kuyiqiniso ukuthi ihluka kancane kakhulu, ngakho-ke sikhuluma nge-1200 kuya ku-1400 euros. Lokhu kuthiwa yiholo eliyisisekelo noma elijwayelekile.
Ukuhlunga nokusabalalisa abasebenzi: Kokubili inhloko yesifunda kanye nokwahlukanisa noma ukwabiwa ngezinyawo kunomholo ophakathi kwama-euro ayi-1100 kuya kwayi-1300. Kuyafana nabasebenzi abancane.
Abasebenzi abasizayo: Kulokhu, abasizi babasebenzi bazoba nomholo we-1080 kanye ne-1200 euros.
Isilabhasi yokuphikisana kweCorreos inezindikimba ezi-13 ezijwayelekile okufanele wazi:
Isihloko 1: Imisebenzi ejwayelekile kanye / noma eposiwe ebhalisiwe, kanye nemikhiqizo abhekisele kuyo.
Isihloko 2: Kugxile engxenyeni ye-e-Commerce nepasela.
Isihloko 3: Amanani ebhizinisi nabanye abaningi bangeziwe, kanye nezinsizakalo ezingeziwe.
Isihloko 4: Ukwehlukaniswa kwamakhono abasebenzi, umsebenzi owenziwa emaposini.
Isihloko 5Ukuphathwa Kwedijithali: Idatha nokuphathwa eCorreos.
Isihloko 6: Ezinye izinsizakalo nemikhiqizo ehlukahlukene.
Isihloko 7Inqubo yokungena.
Isihloko 8: Ukwelashwa kwamaphakeji, imithethonqubo yezokuthutha.
Isihloko 9Iphrothokholi yokulethwa.
Isihloko 10: Izinto zebhizinisi (Amathuluzi afana ne-PDA's, i-IRIS namanye amaningi abalulekile ekwenzeni umsebenzi endaweni yakhe noma emisebenzini ayenzayo.
Isihloko 11: Ukuhlinzekelwa kwamakhasimende nokwelashwa: Ubudlelwano obufanayo, nokuthi ungaba kanjani nokwelashwa kwekhwalithi okusiza isithombe senkampani.
Isihloko 12Ukuhlelwa kwebhizinisi, uhlaka lwezomthetho lwenkampani namasu okuhweba okumele alandelwe.
Isihloko 13Imigomo yokulingana phakathi kobulili nolwazi lwezomthetho oluhambisana nodlame lobulili emsebenzini. Ukuvimbela ukusetshenziswa kwemali ngokungemthetho kanye nokwenza izinto obala, ukuzibophezela kokuziphatha kanye nesivumelwano solwazi maqondana nezokuphepha (LOPD).
Zonke lezi zihloko zingengxenye ejwayelekile noma ethiyori. Kepha ngaphezu kwalokho, kuzodingeka udlule ama-psychotechnics. Ngalokhu, unezincwadi zesilabhasi, ezihlala zisesikhathini futhi nenye enakho konke okudingayo ukuze ukwazi ukunqoba ingxenye ye-psychotechnical. Ungakhohlwa ukuzijayeza nabanye mbumbulu izivivinyo, kanye nezinye izinhlobo zezinto ezizokusiza ekulungiseleleni ukuhlolwa kokukhetha okuningi. Ngokwehlukana noma ndawonye, ​​bazoba inketho ephelele yokukwazi ukubeka amabhethri ukuze bathole indawo yakho.
Izinzuzo zokusebenza eCorreos
Kunezinzuzo eziningi zokusebenza eCorreos. Ngukuphikisana okunikezwa yizifundazwe. Ngakho-ke, ungakhetha okwakho, kanye nesimo sokudlala. Umholo wakhe ufanelekile impela ukuze kubuye kube ngenye yezinzuzo okufanele uzicabangele. Kusukela, okuphansi kakhulu kuzodlula ama-euro ayi-1000.
Amashejuli omsebenzi azokwenziwa nawo abalulekile lapho ubhekwa. Ukuba ngokugcwele noma itoho. Kokubili kuhlala kunezindawo ezitholakalayo. Ngaphezu kwalokho, kufanele sicabange ukuthi sibhekene ne- umsebenzi ohleliwe nasempilweni, nakho konke lokhu okubandakanya. Uma uqhamuka kodwa ungatholi indawo yakho, unenye inketho. Ungafaka i-Post Office Job Bank. Ungayifinyelela futhi uzosebenza ngesikhathi esifanele, kepha kuyiqiniso ukuthi lokhu kuzobalwa engxenyeni yokufaneleka.